मेरो काम, योग्यता र टिमवर्क नै मेरो जितको आधार हो : सौरभ ज्योति :: विजयपथ न्यूज डेस्क :: मेरो काम, योग्यता र टिमवर्क नै मेरो जितको आधार हो : सौरभ ज्योति
जीतपुरमा नबिल बैंकको शाखा बिस्तार
माओवादीलाई भरतपुर, एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा र जसपालाई वीरगंज दिने गठबन्धनको सहमति
राजेशमान सिंहप्रति जनलहर बढ्दै
कसरी भए डीआइजी गणेश उत्कृष्ट बाहिनीपति
बिहीबार, मंसिर ११, २०७७ विजयपथ न्यूज डेस्क
युवा उद्यमी सौरभ ज्योति नेपालको पुरानो औद्योगिक घराना ज्योति समूहका निर्देशक हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा १२ वर्षदेखि कार्यकारिणी समितिमा रहेका ज्योतिले अघिल्लो कार्यकालमा कर तथा राजस्व समिति र हालको कार्यकालमा बैंक, वित्त तथा इन्स्योरेन्स समिति सभापतिका रूपमा काम गरिसकेका छन् । नेपाल युवा उद्यमी मञ्च र सार्क युवा उद्यमी मञ्चको समेत नेतृत्व सम्हालिसकेका ज्योतिसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारी, एजेण्डालगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी :
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा तपाईंको उम्मेदवारी एसोसिएटमै किन ?
महासंघमा मैले चार कार्यकाल अर्थात् १२ वर्ष अवधिमा विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेको छु । यसका साथै नाडा, नेपाल युवा उद्यमी मञ्चलगायत विभिन्न अरू संस्थामा पनि संस्थागत काममा झन्डै २० वर्षको अनुभवी छु । उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको निजी क्षेत्रको छाता संगठन हो । समग्र निजी क्षेत्रको हितका लागि काम गर्ने संस्था हो । विश्वव्यापी रूपमा परेको कोभिडको प्रभावले अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा छ । यसलाई कसरी सहज अवस्थातर्फ ल्याउने भन्नेमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । महासंघलाई नतिजामुखी, व्यावसायिक र व्यवसायमुखी बनाएर लैजाने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो ।
एसोसिएट उपाध्यक्ष भएपछि के गर्ने भन्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
एसोसिएट उपाध्यक्ष जितेपछि मुख्य जिम्मेवारी रोजगारदाता परिषद्को सभापतिको जिम्मेवारी हुन्छ । रोजगारदाता भनेको पूरा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने क्षेत्र हो । लगानीको वातावरण, श्रम ऐन, सम्बन्धित निकाय, ट्रेड युनियन सबैलाई मिलाएर विनविनको अवस्थामा जानुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने लगानी बाहिर अझै जान्छ भने नेपालमा लगानी ल्याउन कठिन हुन्छ । नेपालमा लगानी रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका क्षेत्रमा रोजगारदाता परिषद् समितिको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । लगानीको वातावरण बनाउन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन्छौँ । भविष्यमा हामी स्वयम् आत्मनिर्भर बन्न र आयात घटाउन जोड दिने गरी काम गर्नेछौँ । आयात घटाउनका लागि निर्यात बढाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि नीतिगतदेखि व्यावसायिक सबै क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि हामी कार्ययोजनासहित आउनेछौँ ।
तपाईंको जितको बलियो आधार के हो ?
मेरो जितको सबैभन्दा ठूलो आधार नै विश्वास हो । मेरो टिमबाट जुन सहयोग, माया र आशीर्वाद पाएको छु त्यो मेरो कामबाट नै पाएको हुँ । चुनावमा बोल्न त सजिलो छ, तर काम गरेर देखाउन कठिन छ । मैले महासंघमा जीवनको महत्वपूर्ण १२ वर्ष समय बिताएको छु । विभिन्न समितिको सभापतिको भूमिकामा रहेर काम गरेको छु । बैंक–वित्तीय समितितर्फको सभापतित्व वर्तमान कार्यसमितिमा गरेको छु । मेरो काम, योग्यता र टिमवर्क नै जितको मुख्य आधार हो । १९ जनाको टिममा आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रका विज्ञहरू छन् । नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्र मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । त्यसको विकासमा हामी फोकस हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा मैले गरेका कामले मलाई एसोसिएट उपाध्यक्ष बनाउन सहयोगी बन्नेछन् ।
आफ्नो टिमको बलियो र कमजोर पक्ष के पाउनुभयो ?
सुरुमा बलियो पाटोको कुरा गर्दा हाम्रो टिम डाइभर्स र अनुभवी छ । १९ जनाको टिममा ३ जना नयाँ र एकदमै युवा साथीहरू छन् । अरू सबै महासंघको कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर काम गरेका साथीहरू छन् । व्यवसायको प्रकृति पनि सबै साथीहरूको डाइभर्स खालको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा निजी क्षेत्रको हकहितका लागि लड्न सक्ने व्यक्तिहरू छन् । हामीले एसोसिएटतर्फ हरेक तीन महिनामा ९ सय २६ कम्पनी र सदस्यहरूका समस्या के हुन्, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सधैं सम्पर्कमा रहने योजना बनाएका छौँ । टिमवर्क राम्रो छ । अर्काे कमजोर पक्ष भनेको हामीलाई आफ्नो क्षेत्रको विषयमा पर्याप्त ज्ञान छ, तर महासंघअन्तर्गत पनि धेरै क्षेत्रहरू छन्, जसमा थप जानकारी लिन, बझ्न बाँकी छ । यस्ता क्षेत्रमा हामीले सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नेछौँ ।
एसोसिएटमा प्रोक्सी किनबेच हुन्छ भनिन्छ नि ?
एसोसिएटमा एउटा पनि प्रोक्सी किनबेच हुँदैन, किनभने हरेक कम्पनीहरू व्यावसायिक संस्था हुन् । कम्पनीलाई नेतृत्व गरेको व्यक्तिले आफ्नो बुद्धि–विवेक प्रयोग गरेर भोट हाल्ने हो । सकेसम्म आफैं आएर भोट हाल्ने र जो आउन सक्दैन उसले आफ्नो विश्वासको व्यक्तिलाई पठाएर सही नेतृत्व छनोट गर्ने हो । प्रोक्सी किनबेचको कुरा हल्लामात्रै हो, सबै कम्पनी नेतृत्वले पटक–पटक सोचेर मात्रै भोट खसाउँछन् । सही नेतृत्वका लागि नै भोट खसाउने हो ।
महासंघको प्राथमिकता उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो; तर तपाईं आफैं ट्रेडिङ क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । अहिलेको कठिन परिस्थितिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?
ज्योति समूहको तीनवटा विङ छ– औद्योगिक, सेवा र ट्रेडिङ क्षेत्र । नेपालको सबैभन्दा पुरानो फलामे उद्योग हिमाल आइरन, जुन हाम्रै समूहको हो । अक्सिजन प्लान्ट सबैभन्दा पुरानो उद्योग हो, जुन अहिले पनि चलेको छ । उद्योग भनेको हाम्रो जग हो । उद्योगका साथसाथै हामी ट्रेडिङ पनि गर्छाैं । हाम्रो समूह डाइभर्स छ । ट्रेडिङ किन बढ्यो र उद्योगहरू किन घटे भन्ने सवालमा गहिराइसम्म पुगेर समस्याको पहिचान हुनु जरुरी छ । ट्रेडिङमा रिक्स कम र रिवार्ड बढी हुने नीति आएपछि व्यवसायीहरू अवश्य ट्रेडिङमै लाग्छन् । उद्योगमा रिक्स बढी तर रिवार्ड कम भयो । श्रम ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य आवश्यक ऐनमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । पूर्वाधार, ट्याक्स, प्रशासनिक कार्य सहजीकरण गरेर उत्पादनमा सहयोग नीतिगत रूपबाटै गर्नुपर्छ । ट्रेडिङले पनि रोजगारी त सिर्जना गर्छ, तर बढी भ्यालु एडिसन औद्योगीकरणबाट लिन सकिन्छ ।
एसोसिएटतर्फबाट तपाईं उपाध्यक्ष भए पनि वा नभए पनि आगामी कार्यसमितिले गर्नैपर्ने कामहरू के–के हुन् ?
महासंघले सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रको हित भनेको सम्पूर्ण समाज र राष्ट्रको हित हो । महासंघ भनेको छाता संगठन हो । जित भयो भने नेतृत्व गर्ने हो, यदि हार भएको अवस्थामा मैले १२ वर्षसम्म बिताएको संस्था हो । आफ्नो अनुभव, सल्लाह, माया, विज्ञता प्रदान गरेर अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने हो । हाम्रो टिमले १० वर्षको आर्थिक एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्ने योजना तय गरेका छौँ । आत्मनिर्भर हुन कृषि, उद्योग, डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन, हाइड्रोलगायतका कुन क्षेत्रमा फोकस हुने र हाम्रो समृद्धिको बाटो के हुने भनेर कार्ययोजना बनाएर नै अगाडि बढ्दै छांै ।
महासंघको चुनावमा राजनीतिक चलखेल हुने, आर्थिक स्रोतसाधनको पनि व्यापक प्रयोग हुने परम्परा छ, यसले महासंघको नेतृत्व योग्यभन्दा पनि संरक्षणतर्फ जाने देखिएन र ?
महासंघ भनेको व्यावसायिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था होइन । राजनीतिक चलखेल महासंघमा न्यून गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो । योग्य व्यक्ति पदमा आउनुपर्छ । कोही दोस्रो व्यक्ति म जुन पदमा लड्दै छु त्यसका लागि योग्य छ भने म पद छोड्न तयार छु । म र मजस्ता व्यवसायीको हितमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । योग्यताका आधारमा नेतृत्व आएमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र सफल हुन्छ । त्यसका लागि महासंघमा राजनीति कम गर्नुपर्छ । जब राजनीति बढी चल्छ त्यहाँ योग्य व्यक्ति छायामा पर्छ । योग्य व्यक्ति पदमा ल्याउन हाम्रो टिम लागिपरेको छ । महासंघमा राजनीति टाढा राख्न एउटा उम्मेदवार एउटा व्यवसायीको मात्रै नभएर सबै व्यवसायीको सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
तर तपाईंले यति भन्दै गर्दा महासंघमा राजनीतिक दलहरूको चासो धेरै नै छ नि ?
राजनीतिक दलहरूले महासंघलाई चासो दिनुको कारण हामी अहिले ५४ वर्षमा छौं भने सबै जिल्लामा हाम्रो सञ्जाल छ । कतिपय हाम्रा सञ्जालहरू सरकारका भन्दा धेरै छन् । गरिमाको पनि कुरा हो । चुनाव एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । चुनावमा जेजस्ता चासो आउलान्, तर हामीले निजी क्षेत्रको मुख्य एजेन्डा भुल्नु हुँदैन । चुनावमा केही विभाजित भए पनि चुनावपछाडि हामी सबै व्यावसायिक जगत् एक हौँ, एउटै मुद्दामा जानुपर्छ ।
साभार : कारोबार दैनिक ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ११, २०७७ ०५:४५
सिभिल बैंकद्वारा युथ एवरनेश अफ नेपाललाई सहयोग
पर्सेली निर्जिवन बीमा कर्मचारीहरु संगठित, ईन्स्योरेन्स क्लब अफ वीरगञ्ज गठन
शनिबार, साउन १६, २०७८ विजयपथ न्यूज डेस्क
लायन्स क्लबद्वारा वीउवासङ्घका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई सम्मान
शुक्रबार, साउन ८, २०७८ विजयपथ न्यूज डेस्क
जीतपुरमा नबिल बैंकको शाखा बिस्तार शनिबार, वैशाख १७, २०७९
Bijay Path Daily